Burma in 50 years | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Verdict due for Australian Ross Dunkley, co-founder of Myanmar Times
Uncensored Burma Daily News Headlines – 1st July 2011 →
အေးလေ… မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်လာလို့ ရတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အရေးမှ မဟုတ်တာ။ အကြံအဖန်တွေကလဲ အများသား မဟုတ်လား။ ဒီတော့လဲ…. ဒီလောက်တော့ စစ်ဆေးရမှာပေါ့။ စက်ကတော့ အကြံအဖန်က မစစ်နိုင်ဘူးလေ…
ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သဖြင့် အင်တာနက်မပျက်သော်လည်း Google, Facebook Data Center တို့မှာ စစ်ကြောင့်ပျက်စီးမှု ထဲပါသွားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်တစ်စုက “ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ” ဟူသော အင်တာနက်ရှာဖွေရေးတည်ထောင်ရာ အောင်မြင်သဖြင့် နေ့ချင်းညချင်း ဘီလျံနာဖြစ်သွားသည်။
“ဟေ့ကောင်… ထ… ထ….။ မင်းကလဲ မီးပျက်ပြီးမှောင်ကြီးထဲအိပ်နေတယ်။”
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ လှုပ်နိုးမှုကြောင့်နိုးသွားသည်။ အော်… အင်တာနက်က 10MB လောက် ရှိတဲ့ ဖိုင်ကြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာ စောင့်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတာ အိပ်မက်တွေတောင်မက်နေတယ်။
သြော်… မီးက ပျက်နေတယ်။ ဘောပွဲလဲ ရှုံးပြီ။
တော်ပြီကွာ…. အိပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ အိပ်မက်ပဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်……